Raadi ama ku iibso gaarigaaga barnaamijka Autos.net | Wararka IPhone
Suuqa gawaarida ayaa dhaqaaqa malaayiin yuuro sanad walba baabuurta cusub iyo kuwa la isticmaalay labadaba, markaa hadaan ka fikirayno inaan helno gaari cusub, runtii waa wax xiiso leh inaan ka feejignaano waxa ku dhacaya mid ka mid ah barnaamijyada tirada ugu badan ee xayeysiinta la daabacay.
2 Si loo hagaajiyo
Codsi sidan oo kale ah wuxuu leeyahay laba fure: the tirada xayeysiiska la daabacay iyo sahlanaanta baaritaanka. Xaaladda taagan, waxay sifiican ula kulantaa labada dhismo, maadaama aan ka hadlayno mid ka mid ah boggaga xayeysiiska baabuurta ee ugu firfircoon Spain sidoo kale waxaan codsan karnaa miirayaal horumarsan, taas oo noo oggolaan doonta inaan si weyn u yareyno raadinta oo aan u helno xuquuqda Ads in ku habboon ujeedooyinkayaga ama miisaaniyaddayada.
Suurtagalnimada wax iibsiga, waxaan sidoo kale ku dhejin karnaa xayeysiisyada oo aan si buuxda uga maamuli karnaa iPhone-ka, bixinta kombiyuutarka marwalba iyo xaqiiqda fududeynta habka loo soo daabulayo sawirada maadaama aan qaadi karno oo aan ku dabaqi karno xayeysiiska daqiiqado yar gudahood
Waa inaan muujinaa qodob muhiim ah oo aan ku qancinayno: barnaamijku wuxuu leeyahay a qayb caawimaad aad u wanaagsan taas oo shakiga ugu badan la xalliyo oo dhibaatooyinka jira ee aan ka heli karno isticmaalkeeda wax laga qabto, dhaqan lumaya oo lagu taliyay gaar ahaan codsiyada nuucaan ah oo ay jiraan dad xirfad ahaan aad uga hooseeya farsamada sidoo kale waxaad u baahan doontaa inaad adeegsato abka si aad ugu dhejiso xayeysiis ama aad u iibsato gaari.
In kasta oo arjigu in ka badan buuxiyo himiladiisa ah inuu na siinayo deg deg ah suuq baabuur oo ballaadhan, runtu waxay tahay inay jiraan qaar arrimaha qaabeynta taas oo si cad loo horumarin karo taasina waxay ka dhigeysaa qofka khibrada u leh khibrad iyo xiiso badan.
Waxaa laga yaabaa tusaale fiican inuu yahay xiddigga aan la awoodno calaamadeyn baabuur markaan marin u helno xayeysiiskaaga, maadaama si buuxda loo waafajiyay waxyaabaha la midka ah isla markaana isla markiiba waa iska cadahay. Laakiin haddii aan eegno faahfaahinta waxaan arki karnaa qaab-qorid aad u ballaaran, badhanno aan u dhigmin cabbirka inta kale ee canaasiirta ama warqad duuduuban oo aanan ku haysan dhinac-gees si aan u helno nafteena.
Sikastaba xaalku ha ahaadee faahfaahin yar si fudud loogu hagaajiyay shaqooyinka qaarkood qaybta naqshadeynta. Haddii kale waxay u fulisaa hadafkeeda si aad u wanaagsan.
Cars.net - Baabuurta la isticmaalayfree
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Barnaamijyada IPhone » Raadi ama ku iibso gaarigaaga barnaamijka Autos.net
Cusbooneysiinta WhatsApp, laakiin maahan midka aan sugeyno